Azia: horonantsary mikasika ny fanararaotana noho ny zava-mahadomelina sy ireo Toby fihazonana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Septambra 2010 4:37 GMT
sary tao amin'ilay horonantsary HCLU
Foto-dresaka izao ireo toby fihazonana noho ny fifohana zava-mahadomelina any Azia. Na dia nanolo-tena hiala amin'io fahazaran-dratsiny io aza ny sasany amin'ireo mpiankin-doha amin'ny zava-mahadomelina Aziatika, amin'ireo toerana sasany, nitarika tamin'ny fanararaotana toa misosa ho azy ny zon'olombelona eny an-dalambe izany ka hanidiana ireo olona tsy manan-tsafidy, ampijaliana, aolana, terena hiasa maimaim-poana sy tsy mahazo izay filàna fototra akory.
Ny Fikambanana Hongroa mikasika ny Fahalalahan'ny Mponina dia namoaka Fanararaotana amin'ny anaran'ny Fitsaboana, horonantsary iray vaovao mampiseho ny zavatra iainan'ireo olona lasa any amin'ireo toby fitsaboana an-terisetra noho ny zava-mahadomelina any Azia. Ny sasany nalefan'ireo fianakaviany na nanolo-tena manokana ho any mba hiala amin'ny fahazaran-dratsiny, nefa any amin'ireo toeran-kafa, manao ho gahazarana anangona ireo olona raisin'izy ireo ho “hafahafa” kosa ny miaramila. Noho izany ireo ankizy tsy manan-kialofana, ireo mpivaro-tena sy ireo mpifoka zava-mahadomelina dia halefa any amin'ireo toby ireo ka tsy manana fahafahana hiantso fiarovana. Miaraka amin'ny faniratsirana sy fanalam-baraka, ny sasany amin'ireo toby ireo dia natsangana avy tamin'ny famatsiam-bola nomen'ireo Governemanta Tandrefana, noho izany dia miantso ireo mpijery handray andraikitra ny HCLU:
Iray amin'ieo foibe – Koh Kor – no nakatona noho ireo mpisolo vava ny zon'olombelona kanefa dia mbola betsaka ireo amperinasa. HCLU, miaraka amin'ireo fikambanana iraisam-pirenena tahaka ny UNAIDS na ny UNODC, dia mangataka ny fikatonan'ireo toby ireo. Manantena izahay fa aorian'ny fijeren'ny olona ny horonantsary vaovao nataonay dia maro ireo olona no hiaraka aminay sy hanery ireo governemanta ireo mba hanajanonan'izy ireo ny fanararaotana amin'ny anaran'ny fitsaboana noho ny zava-mahadomelina.
Ny Current TV's Vanguard dia namoaka ireo andiany ao amin'ny aterineto miresaka mikasika ny foto-kevitr'ireo fiankinan-doha amin'ny zava-mahadomelina, ny famokarana *Meth* sy ny fihinanana izany any Kambodia ary nitsidika ny Korsang, foibe natsangana ho vahaolana fanenana ny dona entin'ireo tranga fanararaotana any amin'ireo toby fihazonana tantanan'ny governemanta.
Any Kambodia ihany koa, dia nanao andiana horonantsary roa ho an'ny UPSTV ireo mpianatra ao amin'ny Anjerimanontolon'i Puthisastra mba hanehoana ny fijerin'izy ireo ny antony irobohan'ny tanora amin'ireo zava-mahadomelina raha vao mahita izany:
Amin'ny faran'ilay fizarana Faharoa, niova i Kosal taorian'ny fitànana azy an-tranomaizina nandritra ny 5 taona, vonona hanatsara ireo zavatra ratsy nataony ary hanomboka fiainana vaovao. Ny hetahetan'izy ireo amin'ny fandefasana ireo mpiankin-doha amin'ny zava-mahadomelina any amina toerana iray sahaza azy ireo dia tokony ho tanterahana, satria tsy tokony hiandrasana zava-mahagaga izany.
Raha hamaky bebe kokoa mikasika ireo fanararaotana ny zon'olombelona miseho any amin'ireo toby fihazonana any Azia ianao, dia afaka mamaky ireo tatitry ny Human Rights Watch mikasika ireo toby fitsaboina amin'ny zava-mahadomelina ao amin'ny Where Darkness Knows no Limits (Toeran'ny haizina tsy hita fetra) sy ao amin'ny An Unbreakable Cycle (Tsingerina tsy mety tapahana) any Sina ary ny Skin on the Wire (Hoditra miraikitra amin'ny tariby) any Kambodia.